MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Infotainment - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော website များမှ တဆင့် မိမိစိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာများ၊ သတင်းများကို SMS များ ရယူလက်ခံနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
Service Name Category in Myanmar Language Description in Myanmar Language Charges and Validity How to subscribe How to Unsubscribe
Let’s Play ဖျော်ဖြေရေး သင်၏မိုဘိုင်းမှတဆင့် အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေကိုကစားလိုက်ပါ။ AppBox app မှတဆင့် download လုပ်ကာ ဂိမ်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိကစားနိုင်ပါသည်။ 200 Ks/day Send GAME to 8765 Send STOP GAME to 8765
AppBox ဖျော်ဖြေရေး သင်၏မိုဘိုင်းမှတဆင့် အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေကိုကစားလိုက်ပါ။ AppBox app မှတဆင့် download လုပ်ကာ ဂိမ်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိကစားနိုင်ပါသည်။ 250 Ks/ day http://ab.lotayamm.com/ Send STOP APP to 8980
m-Learning ပညာရေး သင်တန်းတက်စရာမလို စာအုပ်တွေလိုက်ရှာပြီးလေ့လာစရာမလိုပဲ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာချင်ပါသလား။ ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို အင်္ဂလိပ်စာ လိုအပ်တာမို့ အခုပဲ 8282 သို့ ON ဟုပေးပို့ပြီး http://engclass.up.st တွင်လေ့လာလိုက်ပါ။ပထမအကြိမ်သုံးစွဲသူများအတွက် ပထမပတ်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း တစ်ရက် ၁၅၈ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားရပ်တန့်လိုပါက 8282 သို့ OFF ဟုပို့ပါ။အသေးစိတ်ကို ၁၀၆ သို့မေးမြန်းလိုက်ပါ။ 158 Ks/day Send OK to 8282 Send OFF to 8282
Vuclip ဖျော်ဖြေရေး Vuclip Video store သည် ဂီတဗွီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းတို များကို ကြည့်ရှု ရယူနိုင်သည်။ပထမဆုံးသုံးစွဲသူများအတွက် ၇ရက် အခမဲ့ပါ။ 99 Kyats/Day Click www.vzonempt.com to subscribe Send STOP to 8383
Thuta Myay စိုက်ပျိုးရေး တောင်သူဦးကြီးများ လိုအပ်နေသည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သော ဒေသထွက်ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ၊ မိုးလေဝသ နှင့် ကျန်းမာရေး၊ သတင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများစွာကို thutamyay.com မှာလေ့လာနိုင်ပါပြီ။ Play Store နှင့်LoTaYa တို့တွင် App ကို Download ရယူလိုက်ပါ။ 105 Kyats / Day Send TTM to 8834 Send STOPTTM to 8834
BalloneStar အားကစား ကမ္ဘာတစ်လွှား လိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးများ၏ သတင်းများ၊ ပုံရိပ်များ၊ ပွဲစဉ်ဇယားများ၊ ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီးသတင်းများ၊ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်များ၊အကြောင်း စသည့် သတင်းအစုံအလင်ကို တစ်နေတည်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ 105kyats/day (and)
525kyats/day bs.lotayamm.com Send UNSUBBS t0 8118
Nayla ဗေဒင် သုတ ရသ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 158 kyats/day nl.lotayamm.com Send UNSUB t0 8998
DAY OF BIRTH (DOB) HOROSCOPE ဗေဒင် မွေးနေ့အစီအစဉ်မှ မိမိ မွေးနေ့ကိုအခြေခံပီး အကြောင်းအရာများ ဟောပြောချက်များ ကြိုတင်ပြောကြားချက်များကို ရယူလိုက်ပါ။ 263 kyats/week Send to 8503 as below.
MON for Monday born,
TUE for Tuesday born,
WED for Wednesday born,
THU for Thursday born,
FRI for Friday born,
SAT for Saturday,
SUN for Sunday. Send DOB OFF to 8503
Gameloft ဂိမ်း အကန့်အသက်မရှိ မိုဘိုင်းဂိမ်း များကို ရယူပြီးကစားလိုက်ပါ။ပထမဆုံးသုံးစွဲသူများအတွက် ၇ ရက် အခမဲ့ပါ။ 200 Kyats / day Click <http://wapshop.gameloft.com/mpt/> to subscribe Send STOP GAM to 8793
Akon Thi NEWS
Celebrity (text & video)
Horoscope - Saw Yu Nwe (text)
Horoscope - Sayar Zin Yaw Ni (video & text)
DAY OF BIRTH (DOB) HOROSCOPE
ZYN Career Horoscope
ZYN Love Horoscope
ZYN Yadayar Horoscope
Beauty Tips (text)
Budget Tips (text)
Career Tips (text)
Currency Exchange Rate / Tips (text)
Daily Horoscope (ARIES)
Daily Horoscope (AQUARIUS)
Daily Horoscope (CANCER)
Daily Horoscope (CAPRICORN)
Daily Horoscope (GEMINI)
Daily Horoscope (LEO)
Daily Horoscope (LIBRA)
Daily Horoscope (PISCES)
Daily Horoscope (SAGITTARIUS)
Daily Horoscope (TAURUS)
Daily Horoscope (VIRGO)
Diet Tips (text)
Dream Interpretation (text)
First Aid Tips (text)
Fitness Tips (text)
Football Tips Best Match
Fortune Tips (text)
Fun Calendar (text and data)
Lost weight Tips (text)
Love Facts (text)
My Club (text and data)
My Music (text and data)
My RBT (text)
7 Day Voice blast
A Kyi Taw Funny
Aung Chit Min Mahabote
BBC News Voice Blast
BBC One Minutes Sports
D2 Funny Video Services
DVB (Voice Blast)
English Premier League Tips(Resume Date - 14 Aug 2017)
Football All Match (Resume Date - 14 Aug 2017)
Football All Result (Resume Date - 14 Aug 2017)
Funny Ringtone Service
Funny Videos Service
GT8 Ringtone Service
Hot Wallpapers (Latest/ Hottest Wallpapers)
HTML5WAP
Mizzima ( Voice Blast )
Mizzima News app
MOI Voice Blast
Music Ringtone Service
Premium Wallpaper Service
Putet Comic app
San Zarni Bo Horo Voice Blast
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology)
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day)
Sayar Aung Chit Min Horoscope
VM8 Rich Media Contents
Wun Zin e-library App
Horoscopes - eTrade
MUSIC - Downloading Music via SMS
Prediction Goal Score of Football Leagues
Price data of CEXC
Yangon Stock Exchange SMS Service
Agriculture စိုက်ပျိုးရေး စိုက်ပျိုးရေးသတင်းအချက်အလက်များအား တောင်သူဦး ကြီးများသိရှိစေရန် နှင့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။ 525Ks/Week Send AGR to 8411 Send AGR OFF to 8411
Akon Thi NEWS သတင်း လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သုတ၊ ရသ၊ သတင်း အဖြာဖြာအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရရှိမည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1575KS/Month Send NEWS to 8411 Send NEWS OFF to 8411
Cele Club ဖျော်ဖြေရေး သင်ချစ်တဲ့ငွေကြယ်ပွင့်တွေရဲ့ တစ်မူထူးခြားသော ဓာတ်ပုံ ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် Live အစီအစဉ်များကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှု နိုင်မည့် Mobile Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 99Ks/Celebrity/day cc.lotayamm.com Send CELE OFF to 8411
Celebrity (text & video) ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ ၊ လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုများ အစရှိသည့် Exclusive ဗွီဒီယိုဖိုင်များအားကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 263Ks/Video Send CEL to 8411 Send CEL OFF to 8411
DIY ဘဝနေထိုင်မှု အသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအိမ်တွင်း၌ အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုပြန်လည်အလှဆင်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ရူလေ့လာနိုင်ပါသည်။ 158 Ks/ Day Send DIY to 8411 Send DIY OFF to 8411
Healthcare ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတအကြောင်းအရာများ ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်သည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို သိရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 194Ks /SMS Send HL to 8411 Send HL OFF to 8411
Horoscope - Saw Yu Nwe (text) ဗေဒင် ဆရာမဒေါက်တာဒေါ်စောယုနွယ်၏ ရာသီခွင်ဟောစာတမ်းများ၊ နက္ခတာယာများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရာသီခွင်ပေါ်လိုက်၍ (၇)ရက်သားသမီးများ၏ ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 158Ks/ Day Subscription Fees - 210Ks Send SYN to 8411 Send SYN OFF to 8411
Horoscope - Sayar Zin Yaw Ni (video & text) ဗေဒင် ဆရာဇင်ယော်နီ မှ (၇) ရက်သားသမီးများ၏ သက်ဆိုင်ရာနံပါတ်များအလိုက်အထူးဟော ကြားချက်များကို ဗွီဒီယိုဖိုင်များဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 158Ks/ Day Subscription Fees - 210Ks Send ZYN to 8411 Send ZYN OFF to 8411
How To ဘဝနေထိုင်မှု ဘဝမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆိုးအကောင်း၊ အကျိုးအကြောင်း အခက်အခဲမှန်သမျှကို လွယ်ကူစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 158 Ks/ Video Send HOW to 8411 Send HOW OFF to 8411
Jokes ဖျော်ဖြေရေး လက်တလော ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေသော အဖြစ်အပျက်များကို ဟာသအမြင်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသော video များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 210 Ks/ Video Send JOKE to 8411 Send JOKE OFF to 8411
Life Style ဘဝနေထိုင်မှု လူနေမှုဘဝတွင်လိုအပ်သည့် ပျော်ရွှင်စရာနည်းလမ်းကောင်းများ၊ ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်သိမှတ်စရာများနှင့် ပညာရှိအဆိုအမိန့်များအစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ 158Ks / Day Send LS to 8411 Send LS OFF to 8411
Money Talk ပညာရေး စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အကြံဉာဏ်များနှင့် ဗဟုသုတများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 210 Ks/ Video Send MT to 8411 Send MT OFF to 8411
MyMTV ဖျော်ဖြေရေး အောင်မြင်ကျော်ကြား၊ လူကြိုက်များနေသော ပြည်တွင်းနိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်အဆိုတော်များ၏ Exclusive Up To Date သီချင်းဗွီဒီယိုအသစ်များကို ကြည့်ရှုနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 263 Ks/ Video Send MTV to 8411 Send MTV OFF to 8411
Sport အားကစား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အားကစားသတင်းများနှင့် ဘောလုံးပွဲစဉ် ခန့်မှန်းရလဒ် များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 189 Ks/ Day Send SPT to 8411 Send SPT OFF to 8411
BUSINESS INFO ဘဝနေထိုင်မှု အလုပ်အကိုင်သတင်းအစီအစဉ်မှ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်အကြောင်းများ ကိုရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send BIZ to 8503 Send BIZ OFF to 8503
CUTE CLUB ဖျော်ဖြေရေး ကာတွန်းချစ်သူတွေအတွက် Hello Kitty, Bad Badtz-maru, My Melody, Keroppi, Cannamoroll အစရှိသော ချစ်စရာကောင်းသော Wallpaper တွေကို ရယူလိုက်ပါ။နေ့စဉ် ချစ်စရာကောင်းသော Wallpaper တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ။ 105 kyats/day Send CAL to 8503 Send CAL OFF to 8503
DAY OF BIRTH (DOB) HOROSCOPE ဗေဒင် မွေးနေ့အစီအစဉ်မှ မိမိ မွေးနေ့ကိုအခြေခံပီး အကြောင်းအရာများ ဟောပြောချက်များ ကြိုတင်ပြောကြားချက်များကို ရယူလိုက်ပါ။ 263 kyats/week Send to 8503 as below. MON for Monday born, TUE for Tuesday born, WED for Wednesday born, THU for Thursday born, FRI for Friday born, SAT for Saturday, SUN for Sunday. Send DOB OFF to 8503
FOOTBALL HERO အားကစား ဘောလုံးအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ နောက်ဆုံးရ ဘောလုံးသတင်းများ ရမှတ်များ အကြံပြုချက်များ ကိုရယူလိုက်ပါ။ 92 kyats/day Send HERO to 8503 Send HERO OFF to 8503
JOKES ဖျော်ဖြေရေး ဟာသအစီအစဉ်မှ နေ့စဉ်အမျှကြုံတွေ့နေရမှုများ အလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်သော ဟာသအကြောင်းအရာများကို ရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send FUN to 8503 Send FUN OFF to 8503
NEWS - GENERAL သတင်း သတင်းအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းပြည်ပနောက်ဆုံးရသတင်းများ နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းများ ခရီးသွားလာမှုသတင်းများကို ရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send NWS to 8503 Send NWS OFF to 8503
NEWS - SPORTS သတင်း အားကစားအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အားကစားသတင်း စုံစုံလင်လင်များကို ရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send SPT to 8503 Send SPT OFF to 8503
NEWS -ENTERTAINMENT သတင်း ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းပြည်ပဖျော်ဖြေရေးသတင်းများ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ နောက်ဆုံးထွက်သီချင်းများ ရုပ်ရှင်များကို ရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send ENT to 8503 Send ENT OFF to 8503
QUOTE ဘဝနေထိုင်မှု ကိုးကားချက်အစီအစဉ်မှဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများ အချစ်အကြောင်းအရာများ စသည့်ကိုးကားချက်များကို ရယူလိုက်ပါ။ 53 kyats/day Send QUO to 8503 Send QUO OFF to 8503
ZPLAY COMBO ဖျော်ဖြေရေး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဏ္ဍမျိုးစုံသော Android Games, Live Wallpaper နှင့် Application အစရှိတာတွေကို Download ဆွဲကာ ရယူလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ထိုကဏ္ဍများထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုကို အခမဲ့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ 525 kyats/week Send ZP to 8503 Send ZP OFF to 8503
ZPLAY COMBO ဖျော်ဖြေရေး ZPLAY (Android Game)မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ANDROID GAMES များကို download ဆွဲကာ ရယူလိုက်ပါ။တစ်ပတ်တစ်ခါ Game တစ်ခုကိုအခမဲ့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ 315 kyats/week Send AG to 8503 Send AG OFF to 8503
ZPLAY COMBO ဖျော်ဖြေရေး ZPLAY (Live Wallpaper)မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ LIVE WALLPAPERS များကို download ဆွဲကာ ရယူလိုက်ပါ။တစ်ပတ်တစ်ခါ LIVE WALLPAPER တစ်ခုကိုအခမဲ့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ 210 kyats/week Send LW to 8503 Send LW OFF to 8503
ZPLAY COMBO ဖျော်ဖြေရေး ZPLAY (Application)မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Application များကို download ဆွဲကာ ရယူလိုက်ပါ။တစ်ပတ်တစ်ခါ Application တစ်ခုကိုအခမဲ့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ 263 kyats/week Send AP to 8503 Send AP OFF to 8503
ZYN Career Horoscope ဗေဒင် အလုပ်အကိုင်ဇာတာအစီအစဉ်မှ ဆရာဇင်ယော်နီ၏ မိမိမွေးနံအလိုက် အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ အလုပ်အကိုင်အကြောင်းအရာများအား ဆရာဇင်ယော်နီ၏ဟောစတမ်းများ ရယူလိုက်ပါ။ 263 kyats/week Send to 8503 as below. ZCMON for Monday born, ZCTUE for Tuesday born, ZCWED for Wednesday born, ZCTHU for Thursday born, ZCFRI for Friday born, ZCSAT for Saturday, ZCSUN for Sunday. Send ZCAR OFF to 8503
ZYN Love Horoscope ဗေဒင် အချစ်ဇာတာအစီအစဉ်မှ မိမိမွေးနံအလိုက် အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ဖူးစာဖတ်နိမိတ်များအား ဆရာဇင်ယော်နီ၏ဟောစတမ်းများ ရယူလိုက်ပါ။ 263 kyats/week Send to 8503 as below. ZLMON for Monday born, ZLTUE for Tuesday born, ZLWED for Wednesday born, ZLTHU for Thursday born, ZLFRI for Friday born, ZLSAT for Saturday, ZLSUN for Sunday. Send ZLOV OFF to 8503
ZYN Yadayar Horoscope ဗေဒင် ယတြာအစီအစဉ်မှ မိမိမွေးနံအလိုက် ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှု ကြွယ်ဝမှု နှင့် ကံကောင်းမှုများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဆရာဇင်ယော်နီ၏ဟောစတမ်းများရယူလိုက်ပါ။ 92 kyats/day Send to 8503 as below. ZYMON for Monday born, ZYTUE for Tuesday born, ZYWED for Wednesday born, ZYTHU for Thursday born, ZYFRI for Friday born, ZYSAT for Saturday, ZYSUN for Sunday. Send ZY OFF to 8503
BalloneStar အားကစား ကမ္ဘာတစ်လွှား လိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးများ၏ သတင်းများ၊ ပုံရိပ်များ၊ ပွဲစဉ်ဇယားများ၊ ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီးသတင်းများ၊ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်များ၊အကြောင်း စသည့် သတင်းအစုံအလင်ကို တစ်နေတည်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ 105kyats/day (and) 525kyats/day bs.lotayamm.com Send UNSUBBS t0 8118
Big9ဖျော်ဖြေရေး ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Music & Lifestyle အစီအစဉ်တွေအပြင် Live Concert/ Travel Series/ Fashion/ International Series/ Comedy/ Music Video အစရှိတဲ့ ပရိသတ်ကြိုက် နှစ်သက်မယ့် အစီအစဉ်များစွာကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 99 Kyats/day bg.lotayamm.com Send STOPBIG999 to 8989
Beauty Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး Beauty Tips နဲ့အတူ နှစ်သက်ရာ ရုပ်အသွင်ကို ရယူကြပါစို့။ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာပါ။ 126 Ks / daily send BEA to 8302 send BEA OFF to 8302
Budget Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး Budget Tipsနဲ့အတူ ငွေကြေးစီမံခြင်းနည်းမျိုးစုံကိုလေ့လာကြပါစို့။ကုန်ကျစရိတ် စီမံရန်နဲ့ ငွေစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းများက ဖုန်းထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာပါ။ 68 Ks / daily send BT to 8302 send BT OFF to 8302
Career Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး Carrer Tips ကိုရယူပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တိုးတက်မှုရရှိအောင်နဲ့ လက်ရှိအလုပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကြပါစို့။ 68 Ks / daily send CT to 8302 send CT OFF to 8302
Currency Exchange Rate / Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Currency Exchange Rate ဝန်ဆောင်နဲ့အတူ ငွေကြေးလဲလှယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ကြိုတင်စီမံထားကြပါစို့။ 158 Ks /2timesaday send CE to 8302 send CE OFF to 8302
Daily Horoscope (ARIES) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Aries Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:မတ်လ၂၉ မှ ဧပြီလ ၁၉ရက်နေ့ထိ 75 Ks / daily send PHAR to 8302 send PHAR OFF to 8302
Daily Horoscope (AQUARIUS) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Aquarius Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:ဇန်နဝါရီ၂၀မှ ဖေဖော်ဝါရီ၁၈ထိ 75 Ks / daily send PHAQ to 8302 send PHAQ OFF to 8302
Daily Horoscope (CANCER) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Cancer Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:ဇွန်၂၁မှ ဇူလိုင်၂၂ထိ 75 Ks / daily send PHCAN to 8302 send PHCAN OFF to 8302
Daily Horoscope (CAPRICORN) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Capricorn Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ၁၉ထိ 75 Ks / daily send PHCAP to 8302 send PHCAP OFF to 8302
Daily Horoscope (GEMINI) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Gemini Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:မေ၂၁ မှ ဇွန်၂၀ထိ 75 Ks / daily send PHGE to 8302 send PHGE OFF to 8302
Daily Horoscope (LEO) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Leo Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:သြဂုတ်၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၃ ထိ 75 Ks / daily send PHLE to 8302 send PHLE OFF to 8302
Daily Horoscope (LIBRA) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Libra Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်:စက်တင်ဘာ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ထိ 75 Ks / daily send PHLI to 8302 send PHLI OFF to 8302
Daily Horoscope (PISCES) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Pisces Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်: ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ မှ မတ်၂၀ ထိ 75 Ks / daily send PHPI to 8302 send PHPI OFF to 8302
Daily Horoscope (SAGITTARIUS) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Sagittarius Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်: နိုဝင်ဘာ၂၂မှဒီဇင်ဘာ၂၁ထိ 75 Ks / daily send PHSA to 8302 send PHSA OFF to 8302
Daily Horoscope (SCORPIO) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Scorpio Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်: အောက်တိုဘာ၂၃ မှနိုဝင်ဘာ၂၁ထိ 75 Ks / daily send PHSC to 8302 send PHSC OFF to 8302
Daily Horoscope (TAURUS) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Taurus Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်: ဧပြီ၂၀ မှ မေ၂၀ထိ 75 Ks / daily send PHTA to 8302 send PHTA OFF to 8302
Daily Horoscope (VIRGO) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Virgo Horoscope ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ မွေးနေ့အလိုက် ကံကြမ္မာရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ မွေးရက်: သြဂုတ်၂၃ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ထိ 75 Ks / daily send PHVI to 8302 send PHVI OFF to 8302
Dating Tips ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Dating Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ အချိန်၊အားအင်နဲ့ ခေါင်းစားမှုတွေကို သက်သာစေပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ ချစ်ရေးချစ်ရာအကြံပေးစကားများကို ရယူကြပါစို့။ 75 Ks / daily send DATE to 8302 send DATE OFF to 8302
Diet Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Diet Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်တင့်လျှေက်ပတ်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ ကျန်းမာစေမယ့် အာဟာရဆိုင်ရာ အကြံပေးစကားများကို ရယူလိုက်ကြပါ။ 68 Ks / daily send DT to 8302 send DT OFF to 8302
Dream Interpretation (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Dream Interpretation ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်အိမ်မက်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ရှာဖွေလိုက်ကြပါစို့။ 68 Ks / daily send DI to 8302 send DI OFF to 8302
Family Quote ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Family Quotes ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ မိသားစုဝင်တွေကြားက သံယောဇဉ်ကို ထပ်တိုးချည်နှောင်ကြပါစို့။ 75 Ks / daily send FMQ to 8302 send FMQ OFF to 8302
First Aid Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက First Aid Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ရုတ်တရက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါ အသုံးချနိုင်မယ့် ရှေဦးသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကို သင်ယူလိုက်ကြပါစို့။ 68 Ks / daily send FA to 8302 send FA OFF to 8302
Fitness Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Fitness Tips နဲ့အတူ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဆန်းစစ်ပြီး အမြဲတစေလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ရယူကြပါစို့။ 68 Ks / daily send FT to 8302 send FT OFF to 8302
Football Tips Best Match ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Football Tips Best Match ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ဘောလုံးပွဲစဉ်များရဲ့ အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 158 Ks / daily send BM to 8302 send BM OFF to 8302
Football Tips EPL ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Football EPL ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 158 Ks / daily send EPLT to 8302 send EPLT OFF to 8302
Football Tips Goal ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Football Tips Goal ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ဘောလုံးပွဲများရဲ့ အားသာမှုအခြေအနေ/ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 158 Ks / daily send TG to 8302 send TG OFF to 8302
Fortune Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ကံကြမ္မာက ပြောတဲ့ သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ကြိုတင်သိရှိထားပြီး အကျိးရှိရှိအသုံးချကြပါစို့။ 158 Ks / daily send FO to 8302 send FO OFF date to 8302
Fun Calendar (text and data) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Fun Calendar ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်အတွက်အထူးသီးသန့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လှပဆန်းကြယ်တဲ့ နံရံကပ်ပန်းချီလေးတွေကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 210 Ks / daily send FC to 8302 send FC OFF to 8302
Funny Quote ဖျော်ဖြေရေး မညစ်ညမ်းတဲ့ဟာသတွေကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Funny Quote ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ရယ်မောပျော်ရွှင်စရာတွေကို ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါ။ 75 Ks / daily send FNQ to 8302 send FNQ OFF to 8302
Gold & Exchange rate ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Gold and Exchange Rate ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ရွှေအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 105 Ks / daily send GE to 8302 send GE OFF to 8302
Health Tips ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Health Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို မြှင့်တင်လိုက်ကြပါစို့။ 75 Ks / daily send HTIP to 8302 send HTIP OFF to 8302
Inspire Story ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲကInspire Storyဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ဘဝ၊ပျော်ရွှင်မှု၊အကြင်နာ တွေအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စိတ်အင်အားဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်လမ်းတိုများကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 190 Ks / weekly send NS to 8302 send NS OFF to 8302
International News ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက International News ဝန်ဆောင်မှု နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 59 Ks / daily send NT to 8302 send NTY OFF to 8302
Lost weight Tips (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Weight Loss Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိရောက်လျင်မြန်စွာ လျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို လေ့လာကြပါစို့။ 158 Ks / daily send WL to 8302 send WL OFF to 8302
Love Facts (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲကLove Factsဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ အခြားလူများရဲ့ အချစ်အကြောင်း သီကုံးဖွဲ့ဆိုချက်များ၊အလေ့အထများနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေကို လေ့လာကြပါစို့။ 68 Ks / daily send LF to 8302 send LF OFF to 8302
Love Quote ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Love Quotesဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ ချစ်မေတ္တာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြီး ချစ်သူကိုစိတ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးကြပါစို့။ 75 Ks / daily send LVQ to 8302 send LVQ OFF to 8302
Love Story ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Love Story ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုများကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 190 Ks / weekly send LS to 8302 send LS OFF to 8302
MTK App ဖျော်ဖြေရေး နာမည်ကျော်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင်ဟောကြားထားတဲ့ သင့်အနာဂတ် လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခန့်မှန်းချက်များကိုဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 250 Ks / weekly send MTK to 8302 send MTK OFF to 8302
My Club (text and data) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက My Club ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ပျော်ရွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် တေးသီချင်းများ၊ သတိပေးသံစဉ်နဲ့ ဂိမ်းများကို တစ်ပါတည်း ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 310 Ks /3timesaweek send MC to 8302 send MC OFF to 8302
My Music (text and data) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက My Music ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင်နှစ်သက်မယ့် အဆိုတော်များရဲ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်တေးသီချင်းများကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 310 Ks /2timesaweek send MU to 8302 send MU OFF to 8302
My RBT (text) ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲကMy RBTဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းမှ သင်အနှစ်သက်ဆုံးအဆိုတော်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့ သီချင်းများကို လက်ဦးရယူထားကြပါစို့။ 68 Ks /2timesaweek send MR to 8302 send MR OFF to 8302
Women 101 ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Women101 ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ အသားအရေ၊ဆံကေသာနဲ့ အလှအပရေးရာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ 75 Ks / daily send WMN to 8302 send WMN OFF to 8302
Work Quote ဖျော်ဖြေရေး သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက Work Quotes ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ စိတ်ကူးဉာဏ်ကိုထက်မြက်စေပြီး ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲရှိ ရာထူးအခွင့်အလမ်းများ မြင့်တက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ 75 Ks / daily send WKQ to 8302 send WKQ OFF to 8302
7 Day Voice blast သတင်းများ 7Day News မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ဖုန်းမှတဆင့်အလွယ်တကူ နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 105 Kyats/day Call 01-2399077 Call 01-2399077
7 Days News အထွေထွေသတင်းများ 7Day News မှနောက်ဆုံးရ အထွေထွေသတင်းများကို SMS အနေဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send 7DN to 8602 Send 7DN OFF to 8602
A Kyi Taw Funny ဟာသစာစုများ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ရဲ့ဟာသစာစုတိုများကို MPT ဖုန်းများတွင်မိုဘိုင်းစာတိုဝန်ဆောင်မှ ရယူနိုင်ပါမည်။ 75 Kyats/Day Send AKT to 8602 Send AKT OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Ahtun)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAAH to 8602 Send HAAH OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Binga)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAB to 8602 Send HAB OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Adipati)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HADB to 8602 Send HADB OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Marana)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAM to 8602 Send HAM OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Puti)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAP to 8602 Send HAP OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Thike)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAT to 8602 Send HAT OFF to 8602
Aung Chit Min Mahabote ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော မဟာဘုတ်ဗေဒင်(Yaza)ဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/ Daily Send HAY to 8602 Send HAY OFF to 8602
Bagan keyboard စွယ်စုံသုံး သင့်ဖုန်းကီးဘုတ်ကို ကြိုက်သလိုပြင်ဆင်၍ သူငယ်ချင်းများကြားတွင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်ပါပြီ။ 1575 Kyats/Pay Per Purchase Send BAGANKB to 8605
BBC News သတင်းများ BBCသတင်းဌာနမှ သတင်းထူးများကို မိမိဖုန်းမှတစ်ဆင့်နေ့စဉ်အချိန်မှန် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ 168 Kyats/Daily Send BBCNEWS to 8602 Send BBCNEWS OFF to 8602
BBC News Voice Blast သတင်းများ BBC မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကိုဖုန်းမှတဆင့် အလွယ်တကူနားဆင်နိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 126 Kyats/Daily Call 01-2399206 Call 01-2399206
BBC One Minutes Sports အားကစားသတင်းများ BBC မှနောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများကို ဖုန်းမှတဆင့် အလွယ်တကူနေ့စဉ် နားဆင်နိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 63 Kyats/Daily Call 01-2399206 Call 01-2399206
BBC Sports News အားကစားသတင်းများ BBCသတင်းဌာနမှ အားကစားသတင်းဦးသတင်းထူးများကို မိမိဖုန်းမှတစ်ဆင့်နေ့စဉ်အချိန်မှန် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send BBCSPORTS to 8602 Send BBCSPORTS OFF to 8602
Beauty Advices ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ အချက်များ သင်၏အလှအပနှင့်ပတ်သက်၍ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအကြံပြုချက်များကိုရရှိနိုင်သော SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ 95 Kyats/Daily Send BA to 8602 Send BA OFF to 8602
Beauty Tips ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ အချက်များ အလှအပရေးရာ အကြောင်းအရာများကို အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှူနိုင်သော SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send BEA to 8602 Send BEA OFF to 8602
Buddhist Dhammas ဘာသာရေး စောင့်စည်းလိုက်နာအပ်သော လူ့အကျင့်အဝတ်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အကြံပြုချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 95 Kyats/Daily Send BD to 8602 Send BD OFF to 8602
Comic Wallpaper ဖုန်း Wallpaper များ အလန်းစားဖုန်းWallpaperများကို SMS link များအနေဖြင့် ရရှိနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send CM8 to 8605 Send CM8 to 8605
D2 Funny Video Services ဟာသဗွီဒီယိုတိုများ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဟာသဗီဒီယိုများအား SMS link များအနေဖြင့် ရရှိနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 210 Kyats/Daily Send D2 to 8605 Send D2 OFF to 8605
DVB (Voice Blast) အထွေထွေသတင်းများ DVBမှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကိုဖုန်းမှတဆင့် နားဆင်နိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 252 Kyats/Daily Send DVBVB to 8604 Send DVBVB OFF to 8604
DVB News အထွေထွေသတင်းများ DVB မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send DVBNEWS to 8602 Send DVBNEWS OFF to 8602
English Learning Tips ပညာရေးအထောက်ကူအချက်များ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကိုရရှိနိုင်သော SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 63 Kyats/Daily Send ENG to 8602 Send ENG OFF to 8602
English Premier League Tips(Resume Date - 14 Aug 2017) အားကစား သတင်းအချက်များ English Premier League ပွဲစဉ်များ၏ အင်တာနက်ပေါက်ကြေးများကိုပွဲမတိုင်မှီညနေဘက်တွင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Pay Match Day Send EPLT to 8602 Send EPLT OFF to 8602
English Study ပညာရေးအထောက်ကူအချက်များ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကိုရရှိနိုင်သော SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 95 Kyats/Daily Send ES to 8602 Send ES OFF to 8602
Football All Match (Resume Date - 14 Aug 2017) အားကစား ရလဒ်များ ဘောလုံးပွဲများ၏ ပွဲပြီးရလဒ်များကို ပွဲပြီးပြီးချင်း ဖုန်းပေါ် မှSMS ဖြင့်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 700 Kyats/Pay Match Day Send ALLM to 8602 Send ALLM OFF to 8602
Football All Result (Resume Date - 14 Aug 2017) အားကစား ရလဒ်များ ဘောလုံးပွဲများ၏ ပွဲပြီးရလဒ်များကို ပွဲပြီးနောက်နေ့မနက်(၆)နာရီတွင် SMS ဖြင့် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 263 Kyats/Pay Match Day Send ALLR to 8602 Send ALLR OFF to 8602
Funny Ringtone Service ဖုန်းသီချင်းသံ ဟာသဖုန်းသီချင်းသံများအားရယူနိုင်မည့် SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send RT8 to 8605 Send RT8 OFF to 8605
Funny Videos Service ဟာသဗွီဒီယိုတိုများ ဟာသဗီဒီယိုတိုများအားရယူနိုင်မည့် SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 315 Kyats/Daily Send MV to 8605 Send MV OFF to 8605
Gandawin Quotations စိတ်အားတက်ကြွစေသောစာစုများ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်စာစုများကို SMS အနေဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 95 Kyats/Weekdays Only Send GDWQU to 8602 Send GDWQU OFF to 8602
Gold and Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး နောက်ဆုံးရ နိုင်ငံတကာငွေကြေး ငွေလဲနှုန်းများကို SMS မှတဆင့်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 105 Kyats/Daily Send BGER to 8602 Send BGER OFF to 8602
GT8 Ringtone Service ဖုန်းသီချင်းသံ အလန်းစားဖုန်း Ringtone များကို SMS link များအနေဖြင့်ရရှိနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 210 Kyats/Daily Send GT8 to 8605 Send GT8 OFF to 8605
Health Advices ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုချက်များ ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် SMS ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 95 Kyats/Daily Send HA to 8602 Send HA OFF to 8602
Health Tips ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုချက်များ ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် SMS ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 63 Kyats/Daily Send HEALTH to 8602 Send HEALTH OFF to 8602
Hot Wallpapers (Latest/ Hottest Wallpapers) ဖုန်း Wallpaper များ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အမိုက်စားဖုန်း wallpaper များကိုရယူနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 210 Kyats/Daily Send HOT to 8605 Send HOT OFF to 8605
HTML5WAP ကစားနည်းများ HTML5 WAP ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ဂိမ်းဆော့ကစားနိုင်သည့် SMS link များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 315 Kyats/Daily Send GM to 8605 Send GM OFF to 8605
Job Marketing အလုပ်သစ်ရှာဖွေမှု Accountant နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send JA to 8602 Send JA OFF to 8602
Job Marketing အလုပ်သစ်ရှာဖွေမှု Engineer နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send JE to 8602 Send JE OFF to 8602
Job Marketing အလုပ်သစ်ရှာဖွေမှု IT နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send JIT to 8602 Send JIT OFF to 8602
Job Marketing အလုပ်သစ်ရှာဖွေမှု Marketing နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send JM to 8602 Send JM OFF to 8602
Job Marketing အလုပ်သစ်ရှာဖွေမှု Sales နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/Daily Send JS to 8602 Send JS OFF to 8602
Legacy Music သီချင်းများ နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများကို ဝယ်ယူနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ 315/Pay Per Purchase Send BUY to 8605
Legacy Music သီချင်းများ နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများကို ဝယ်ယူနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ 315/Pay Per Purchase Send GIFT to 8605
Mizzima ( Voice Blast ) အထွေထွေသတင်းများ Mizzima မှနောက်ဆုံးရ ဖျော်ဖြေရေးသတင်းများကို ဖုန်းမှတဆင့်နားဆင်နိုင်သောအသံသတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ 147 Kyats/Daily Call 01-2399-999 Call 01-2399-999
Mizzima News ဖျော်ဖြေမှုသတင်းများ(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ ဖျော်ဖြေရေးသတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNEE to 8602 Send MNEE OFF to 8602
Mizzima News ဖျော်ဖြေမှုသတင်းများ(မြန်မာဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ ဖျော်ဖြေရေး သတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNEM to 8602 Send MNEM OFF to 8602
Mizzima News အထွေထွေသတင်းများ(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း သတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNGE to 8602 Send MNGE OFF to 8602
Mizzima News အထွေထွေသတင်းများ(မြန်မာဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း သတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNGM to 8602 Send MNGM OFF to 8602
Mizzima News အားကစားသတင်းများ(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNSE to 8602 Send MNSE OFF to 8602
Mizzima News အားကစားသတင်းများ(မြန်မာဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send MNSM to 8602 Send MNSM OFF to 8602
Mizzima News တိုင်းရင်းသားသတင်းများ(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ တိုင်းရင်းသားသတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send EHE to 8602 Send EHE OFF to 8602
Mizzima News တိုင်းရင်းသားသတင်းများ(မြန်မာဘာသာ) Mizzima မှနောက်ဆုံးရ တိုင်းရင်းသားသတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/Daily Send EHM to 8602 Send EHM OFF to 8602
Mizzima News app သတင်းများ App MIZZIMA Application ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ 250 Kyats/Weekly Click https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bit.mizzimadailynews to download the app -
MOI Voice Blast တိုင်းရင်းသားသတင်း မြန်မာ့အသံ မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို ဖုန်းမှတဆင့်အလွယ်တကူ နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 170 Kyats/day Call 01-2399203 Call 01-2399203
Money Advices ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွင် ကင်းကွာ၍မရနိုင်သော ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် အကြံပြုချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 95 Kyats/day Send MA to 8602 Send MA OFF to 8602
Music Ringtone Service ဖုန်းသီချင်းသံ ဖုန်းလာတိုင်း သူများနှင့်မတူသည့် အလန်းစားဖုန်းသီချင်းသံများကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 315 Kyats/day Send RD to 8605 Send RD OFF to 8602
Myanmar Time New အထွေထွေသတင်း (အင်္ဂလိပ်) Myanmar Times မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း သတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send MTBNE to 8602 Send MTBNE OFF to 8602
Myanmar Time New အထွေထွေသတင်း (မြန်မာ) Myanmar Times မှနောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း သတင်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်နေ့စဉ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send MTBNM to 8602 Send MTBNM OFF to 8602
Premium Wallpaper Service ဖုန်းနောက်ခံပုံဝန်ဆောင်မှု အမိုက်စားဖုန်းနောက်ခံပုံများကိုရယူနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 272 Kyats/day Send WP to 8605 Send WP OFF to 8605
Putet Comic app Ebook App ပုတက်ကာတွန်းကို ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 525 Kyats/Month N/A (One Time Service) N/A
Relationship Tips နှလုံးသားရေးရာအကြံပြုချက်များ နေ့စဉ်လူမှုဘဝဆက်ဆံရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် နှလုံးသားရေးရာအကြံပြုချက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 95 Kyats/day Send RT to 8602 Send RT OFF to 8602
San Zarni Bo Horo Voice Blast ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော ရာသီခွင်အလိုက်ဟောစာတမ်းများကို ဖုန်းပေါ်မှ နားဆင်နိုင်သော အသံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 105 Kyats/day Call 01-2399201 Call 01-2399201
San Zarni Bo Horo Voice Blast ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော နေ့နံအလိုက်ဟောစာတမ်းများကို ဖုန်းပေါ်မှ နားဆင်နိုင်သော အသံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 105 Kyats/day Call 01-2399201 Call 01-2399201
San Zarni Bo Horo Voice Blast ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော အထွေထွေဟောစာတမ်းများကို ဖုန်းပေါ်မှ နားဆင်နိုင်သော အသံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 74 Kyats/day Call 01-2399201 Call 01-2399201
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော AQUARIUS ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SAQU to 8602 Send SAQU OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော ARIES ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SARI to 8602 Send SARI OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော CANCER ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SCAN to 8602 Send SCAN OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော CAPRICORN ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SCAP to 8602 Send SCAP OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော GEMINI ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SGEM to 8602 Send SGEM OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော LEO ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SLEO to 8602 Send SLEO OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော LIBRA ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SLIB to 8602 Send SLIB OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော PISCES ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SPIS to 8602 Send SPIS OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော SAGITTARIUS ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SSAG to 8602 Send SSAG OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော SCORPIO ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SSCO to 8602 Send SSCO OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော TAURUS ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send STAU to 8602 Send STAU OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Astrology) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော VIRGO ရာသီဖွားများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMS ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SVIR to 8602 Send SVIR OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောသောကြာနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SFRI to 8602 Send SFRI OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောတနင်္လာနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SMON to 8602 Send SMON OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောရာဟုသားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SRAH to 8602 Send SRAH OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောစနေနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SSAT to 8602 Send SSAT OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SSUN to 8602 Send SSUN OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောကြာသပတေးနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send STHU to 8602 Send STHU OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောအင်္ဂါနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send STUE to 8602 Send STUE OFF to 8602
San Zarni Bo Zodiac Horoscope (Day) ဗေဒင် ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသောဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကို SMSဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send STHU to 8602 Send SWED OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော 1 ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN1 to 8602 Send HAN1 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော2ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN2 to 8602 Send HAN2 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော3ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN3 to 8602 Send HAN3 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော4ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN4 to 8602 Send HAN4 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော5ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN5 to 8602 Send HAN5 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော6ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN6 to 8602 Send HAN6 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော7ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN7 to 8602 Send HAN7 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော 8 ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN8 to 8602 Send HAN8 OFF to 8602
Sayar Aung Chit Min Horoscope ဗေဒင် ဆရာအောင်ချစ်မင်းဟောကြားသော9ဂဏန်းမွေးဖွားသူများအတွက်တစ်ရက်စာဟောစာတမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ 84 Kyats/day Send HAN9 to 8602 Send HAN9 OFF to 8602
SMART Motivation စိတ်ခွန်အားဖြစ်ဖွယ်စာစုများ စိတ်ဓာတ်ကျနေပါသလား။ သင့်စိတ်ဓါတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးနိုင်မည့်စာစုများကို SMS အနေဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 105 Kyats/day Send SMART to 8602 Send SMART OFF to 8602
Sports News အားကစားသတင်း အားကစားသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်မည့် SMS ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 63 Kyats/day Send SNEWS to 8602 Send SNEWS OFF to 8602
VM8 Rich Media Contents ဖုန်းနောက်ခံပုံ၊ ဖုန်းသီချင်းသံနှင့် ဟာသဗီဒီယိုအတိုများ (Content အစုံ) Wallpaper, Ringtoneနှင့်ရယ်ရွှင်စရာဗီဒီယိုအတိုအထွာများကို SMS link များအဖြစ်ရယူနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ 210 Kyats/day Send VM8 to 8602 Send VM8 OFF to 8602
Weight Loss လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များ သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်၊ အဆီချနည်းများနှင့် ကိုယ်ခန္ဒာလှပရန်အကြံပေးချက်များဖြင့်ပတ်သက်၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအကြံပြုချက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 95 Kyats/day Send WL to 8602 Send WL OFF to 8602
Wun Zin e-library App Ebook App ဝန်ဇင်းသည် သုတ၊ ရသစာအုပ်ပေါင်း1000+အပြင် ဈေးကွက်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး မဂ္ဂဇင်းတွေကို သင့်ဖုန်းပေါ်ကနေ ဖတ်ရှုနေနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 525 Kyats/ Per Purchase 840 Kyats/ Per Purchase 1575 Kyats/ Per Purchase 3150 Kyats/ Per Purchase Click http://bit.ly/wz_play NA
Wun Zin e-library App Ebook App ဝန်ဇင်းသည် သုတ၊ ရသစာအုပ်ပေါင်း1000+အပြင် လူကြိုက်အများဆုံး မဂ္ဂဇင်းတွေကို သင့်ဖုန်းပေါ်ကနေ ဖတ်ရှုနေနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 525 Kyats/ bi-weekly 840 Kyats/ bi-weekly Click http://bit.ly/wz_play Send WZ STOP to 8605
Gameloft ဂိမ်း အကန့်အသက်မရှိ မိုဘိုင်းဂိမ်း များကို ရယူပြီးကစားလိုက်ပါ။ပထမဆုံးသုံးစွဲသူများအတွက် ၇ ရက် အခမဲ့ပါ။ 200 Kyats / day Click http://wapshop.gameloft.com/mpt/ to subscribe Send STOP GAME to 8793
Mahar ဖျော်ဖြေရေး မဟာမိုဘိုင်းမှာ မြန်မာဇာတ်ကားသစ် ဇာတ်ကားကောင်းများကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 99 ks per movie till 31.7.2018. After that 150 Ks per movie Click http://mh.lotayamm.com/ to download app NA
Let's Play ဖျော်ဖြေရေး သင်၏မိုဘိုင်းမှတဆင့် အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေကိုကစားလိုက်ပါ။ AppBox app မှတဆင့် download လုပ်ကာ ဂိမ်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိကစားနိုင်ပါသည်။ 200 Ks/day Send GAME to 8765 Send STOP GAME to 8765
7887 Healthcare Call Center သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး 7887 Healthcare Call Center - ""မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှ သင့် မိသားစုဆရာဝန်"" “သိလိုသမျှ ကျန်းမာရေး ၇၈၈၇ ဖုန်းဆက်မေး” www.healthcare.com.mm 100 Ks per minute Call 7887 NA
DigiInfo အထွေထွေသတင်း M-Phone ၏ Digital Info ဝန်ဆောင်မှုမှနေ့စဉ်ခေတ်မှီရေပန်းစားနေသောမိုဘိုင်းဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊ကင်မရာစသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်နည်းပညာအကြာင်းများနှင့်ဈေးနှုန်းသတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်SMSသတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ 53Ks Send DG to 8212 Send DGOFF to 8212
DigiInfo အထွေထွေသတင်း M-Phone ၏ Digital Info ဝန်ဆောင်မှုမှနေ့စဉ်ခေတ်မှီရေပန်းစားနေသောမိုဘိုင်းဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊ကင်မရာစသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်နည်းပညာအကြာင်းများနှင့်ဈေးနှုန်းသတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်SMSသတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ 315ks Send DGW to 8212 Send DGOFF to 8212
DigiInfo အထွေထွေသတင်း M-Phone ၏ Digital Info ဝန်ဆောင်မှုမှနေ့စဉ်ခေတ်မှီရေပန်းစားနေသောမိုဘိုင်းဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊ကင်မရာစသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်နည်းပညာအကြာင်းများနှင့်ဈေးနှုန်းသတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်SMSသတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ 1050ks Send DGM to 8212 Send DGOFF to 8212
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဒေါ်လာဈေး၊Earnings နှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် USD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send USD to 8205 Send USDOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ယူရိုဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် EUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send EUR to 8205 Send EUROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တရုတ်ယွမ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် CNY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send CNY to 8205 Send CNYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် အိန္ဒိယရူပီးဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် INR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send INR to 8205 Send INROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် ဂျပန်ယန်းဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် JPY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send JPY to 8205 Send JPYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် မလေးရှားရင်းဂစ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် MYR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send MYR to 8205 Send MYROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် ထိုင်းဘတ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် THB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send THB to 8205 Send THBOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် စင်ကာပူဒေါ်လာဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် SGD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send SGD to 8205 Send SGDOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက် ဒေါ်လာဈေး၊Earnings နှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UUSD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UUSD to 8205 Send UUSDOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ယူရိုဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UEUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UEUR to 8205 Send UEUROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တရုတ်ယွမ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UCNY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UCNY to 8205 Send UCNYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အိန္ဒိယရူပီးဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UINR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UINR to 8205 Send UINROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဂျပန်ယန်းဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UJPY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UJPY to 8205 Send UJPYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မလေးရှားရင်းဂစ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UMYR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UMYR to 8205 Send UMYROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ထိုင်းဘတ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UTHBဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UTHB to 8205 Send UTHBOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး စင်ကာပူဒေါ်လာဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် USGD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send USGD to 8205 Send USGDOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဒေါ်လာဈေး၊Earnings နှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZUSD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZUSD to 8205 Send ZUSDOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ယူရိုဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZEUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZEUR to 8205 Send ZEUROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တရုတ်ယွမ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZCNY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZCNY to 8205 Send ZCNYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အိန္ဒိယရူပီးဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZINR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZINR to 8205 Send ZINROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဂျပန်ယန်းဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZJPY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZJPY to 8205 Send ZJPYOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မလေးရှားရင်းဂစ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZMYR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZMYR to 8205 Send ZMYROFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ထိုင်းဘတ်ဈေးနှင့် ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းဈေးများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန်ZTHBဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZTHB to 8205 Send ZTHBOFF to 8205
Currency Exchange Rate သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး စင်ကာပူဒေါ်လာဈေးကို နေ့စဉ်အချိန်မှန်သိရှိနိုင်ရန် ZSGD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZSGD to 8205 Send ZSGDOFF to 8205
Eleven News သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အရေးကြီးသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် 11NEWS ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send 11NEWS to 8205 Send 11NEWSOFF to 8205
Eleven News သတင်း အရေးကြီးသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် U11NEWS ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send U11NEWS to 8205 Send U11NEWSOFF to 8205
Eleven News သတင်း အရေးကြီးသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် Z11NEWS ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send Z11NEWS to 8205 Send Z11NEWSOFF to 8205
Gold Price သတင်းအချက်အလက် လန်ဒန်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမှ အကယ်ဒမီရွှေဈေးနှုန်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် GLD ဟု 8205သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send GLD to 8205 Send GLDOFF to 8205
Gold Price သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး လန်ဒန်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမှ အကယ်ဒမီရွှေဈေးနှုန်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZGLD ဟု 8205သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZGLD to 8205 Send ZGLDOFF to 8205
Gold Price သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး လန်ဒန်ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမှ အကယ်ဒမီရွှေဈေးနှုန်းများကို နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UGLD ဟု 8205သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UGLD to 8205 Send UGLDOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မိဿရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZARI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZARI to 8205 Send ZARIOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ပြိဿ ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZTAU ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZTAU to 8205 Send ZTAUOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မေထုန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZGEM ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZGEM to 8205 Send ZGEMOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကရကဋ်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZCAN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZCAN to 8205 Send ZCANOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် သိဟ်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZLEO ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZLEO to 8205 Send ZLEOOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZVIR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZVIR to 8205 Send ZVIROFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် တူရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZLIB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZLIB to 8205 Send ZLIBOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZSCO ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZSCO to 8205 Send ZSCOOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ဓနုရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZSAG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZSAG to 8205 Send ZSAGOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မကာရရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZCAP ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZCAP to 8205 Send ZCAPOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကုံရာသီဖွာ စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZAQU ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZAQU to 8205 Send ZAQUOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မိန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ZPIC ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ZPIC to 8205 Send ZPICOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မိဿရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UARI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UARI to 8205 Send UARIOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ပြိဿ ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UTAU ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UTAU to 8205 Send UTAUOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မေထုန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UGEM ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UGEM to 8205 Send UGEMOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကရကဋ်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UCAN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UCAN to 8205 Send UCANOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် သိဟ်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ULEO ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ULEO to 8205 Send ULEOOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UVIR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UVIR to 8205 Send UVIROFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် တူရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက ULIB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send ULIB to 8205 Send ULIBOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက USCO ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send USCO to 8205 Send USCOOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ဓနုရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက USAG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send USAG to 8205 Send USAGOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မကာရရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UCAP ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UCAP to 8205 Send UCAPOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် ကုံရာသီဖွာ စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UAQU ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UAQU to 8205 Send UAQUOFF to 8205
Horoscopes - eTrade ဗေဒင် မိန်ရာသီဖွား စီးပွားရေးဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလိုပါက UPIC ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 126 Ks per Week Send UPIC to 8205 Send UPICOFF to 8205
Mobile Newspaper သတင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ လတ်တလော သတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဈေးကွက်၊ ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်စဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းများကို သိရှိနိုင်ရန် NWR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send NWR to 8205 Send NWROFF to 8205
Mobile Newspaper သတင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ လတ်တလော သတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဈေးကွက်၊ ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်စဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းများကို သိရှိနိုင်ရန် UNWR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UNWR to 8205 Send UNWROFF to 8205
Mobile Newspaper သတင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ လတ်တလော သတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဈေးကွက်၊ ထူးခြားဆန်းကြယ် ဖြစ်စဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ZNWR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZNWR to 8205 Send ZNWROFF to 8205
MUSIC - Downloading Music via SMS သီချင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်နားဆင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ www.sm.com.mm/music 315 Ks per song Send buy Specificed song code to 8204 (example: Send buy S10663 to 8205)
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရို 2016ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZEUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZEUR to 8205 Send ZEUROFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား Copa Americaဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZCOPA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZCOPA to 8205 Send ZCOPAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZEPL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZEPL to 8205 Send ZEULOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား လာလီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZLGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZLGA to 8205 Send ZLGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZBGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZBGA to 8205 Send ZBGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား စီးရီးအေဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZSEA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZSEA to 8205 Send ZSEAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZCL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZCL to 8205 Send ZCLOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရိုပါလိဂ် ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZEUL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZEUL to 8205 Send ZEULOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရို 2016ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZEUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UEUR to 8205 Send UEUROFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား Copa Americaဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZCOPA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UCOPA to 8205 Send UCOPAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် UEPL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UEPL to 8205 Send UEPLOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား လာလီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ULGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ULGA to 8205 Send ULGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် UBGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UBGA to 8205 Send UBGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား စီးရီးအေဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် USEA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send USEA to 8205 Send USEAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် UCL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UCL to 8205 Send UCLOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရိုပါလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် UEUL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UEUL to 8205 Send UEULOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရို 2016ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZEUR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send EUR to 8205 Send EUROFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား Copa Americaဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် ZCOPA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send COPA to 8205 Send COPAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် EPL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send EPL to 8205 Send EPLOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား လာလီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် LGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send LGA to 8205 Send LGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် BGA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send BGA to 8205 Send BGAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား စီးရီးအေဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် SEA ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send SEA to 8205 Send SEAOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် CL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send CL to 8205 Send CLOFF to 8205
Prediction Goal Score of Football Leagues အားကစား ယူရိုပါလိဂ်ဘောလုံးသတင်းနှင့်ပွဲစဉ်ခန့်မှန်းချက်များ သိရှိနိုင်ရန် EUL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send EUL to 8205 Send EULOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဘုရင်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်(ရန်ကုန်) ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PBY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PBY to 8205 Send PBYOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး များကိုနေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် 35 Ks per Day Send PMD to 8205 Send PMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး င်္ဟသာတ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PHT ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PHT to 8205 Send PHTOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PPYI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PPYI to 8205 Send PPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PAL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PAL to 8205 Send PALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PMG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PMG to 8205 Send PMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PMW ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PMW to 8205 Send PMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PSB to 8205 Send PSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PMGN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PMGN to 8205 Send PMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PPK ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PPK to 8205 Send PPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PTG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PTG to 8205 Send PTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် PSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PSL to 8205 Send PSLFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဘုရင်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်(ရန်ကုန်) ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPBY ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPBY to 8205 Send UPBYOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPMD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPMD to 8205 Send UPMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး င်္ဟသာတ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPHT ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPHT to 8205 Send UPHTOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPPYI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPPYI to 8205 Send UPPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPAL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPAL to 8205 Send UPALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPMG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPMG to 8205 Send UPMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPMW ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPMW to 8205 Send UPMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPSB to 8205 Send UPSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPMGN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPMGN to 8205 Send UPMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPPK ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPPK to 8205 Send UPPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPTG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPTG to 8205 Send UPTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UPSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UPSL to 8205 Send UPSLOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဘုရင်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်(ရန်ကုန်) ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPBYဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPBY to 8205 Send ZPBYOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPMDဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPMD to 8205 Send ZPMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး င်္ဟသာတ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPHTဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPHT to 8205 Send ZPHTOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPPYIဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPPYI to 8205 Send ZPPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPALဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPAL to 8205 Send ZPALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPMGဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPMG to 8205 Send ZPMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPMWဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPMW to 8205 Send ZPMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPSB to 8205 Send ZPSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPMGNဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPMGN to 8205 Send ZPMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPPKဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPPK to 8205 Send ZPPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPTGဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZPTG to 8205 Send ZPTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင်ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZPSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZPSL to 8205 Send ZPSLOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSMD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSMD to 8205 Send OSMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSPYI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSPYI to 8205 Send OSPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSAL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSAL to 8205 Send OSALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSMG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSMG to 8205 Send OSMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSMW ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSMW to 8205 Send OSMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSSB to 8205 Send OSSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSMGN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSMGN to 8205 Send OSMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSPK ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSPK to 8205 Send OSPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSTG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSTG to 8205 Send OSTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် OSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send OSL to 8205 Send OSLOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSMD ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSMD to 8205 Send UOSMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSPYI ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSPYI to 8205 Send UOSPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSAL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSAL to 8205 Send UOSALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSMG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSMG to 8205 Send UOSMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSMW ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSMW to 8205 Send UOSMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send PMGN to 8205 Send UOSSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSMGN ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSMGN to 8205 Send UOSMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSPK ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSPK to 8205 Send UOSPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSTG ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send UOSTG to 8205 Send UOSTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် UOSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send UOSL to 8205 Send UOSLOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSMDဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSMD to 8205 Send ZOSMDOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပြည် ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSPYIဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSPYI to 8205 Send ZOSPYIOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး အောင်လံ ဈေးကွက် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSALဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSAL to 8205 Send ZOSALOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မကွေး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSMGဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSMG to 8205 Send ZOSMGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSMWဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSMW to 8205 Send ZOSMWOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေဘို ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်များ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSSB ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZOSSB to 8205 Send ZOSSBOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး မြင်းခြံ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSMGNဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSMGN to 8205 Send ZOSMGNOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ပခုက္ကူ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSPKဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSPK to 8205 Send ZOSPKOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး တောင်ကြီး ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSTGဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 53 Ks per Day Send ZOSTG to 8205 Send ZOSTGOFF to 8205
Price data of CEXC သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရွှေလီ ကုန်စည်ဒိုင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ နေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် ZOSSL ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send ZOSSL to 8205 Send ZOSSLOFF to 8205
Shwe Stream ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကိုနေ့စဉ်သိရှိနိုင်ရန် STAR ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send star to 8205 Send staroff to 8205
Star ဖျော်ဖြေရေး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ များကို စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Shwe Stream App ကို www.sm.com.mm/sstream မှာ အခုပဲ Download ရယူလိုက်ပါ။ 99 Ks per Day Send MOV to 8205 Send MOVOFF to 8205
Yangon Stock Exchange SMS Service သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းမှ စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကိုနေ့စဉ် အချိန်မှန်သိရှိနိုင်ရန် YSX ဟု 8205 သို့ SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန် www.sm.com.mm/help 35 Ks per Day Send YSX to 8205 Send YSXOFF to 8205
SMS ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်း
အားကစားသတင်း မိုးလေဝသသတင်းတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီအမြဲတမ်းကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
မကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုတွေကို မက်ဆေ့ကနေကြည့်လို့ရပြီ။
ဖုန်းခေါ်သူတွေ နားဆင်စေဖို့ သံစဉ်သီချင်း ရွေးချယ်မယ်။
MPT VAS Services Info
Call me back နဲ့ ခေါ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းပြန်ခေါ်ခိုင်းလို့ ရသွားပြီ။
MPT ရဲ့ Balance Transfer ကို အသုံးပြုပြီး လွယ်ကူစွာ ငွေလွှဲကြမယ်။
ကိုယ့်နာမည်နဲ့ Name Tune ထားကြမယ်။
6006 (APN) သို့ "SMS" ဟု အခမဲ့ SMS ပေးပို့၍လည်း ရယူနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းပြောနေတုန်းမှာပဲ အရေးကြီးဖုန်းတွေ ၀င်လာလဲ ကိုင်လို့ရပါပြီ။
ကိုင်လို့ရတဲ့ နောက်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ နံပါတ်ကို လွှဲပေးလို့ရပြီ။
USSD ကို သုံး၍ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူကြပါစို့။
Gifting Service (ပို႔ဘီ)
ချစ်ခင်ရသူတွေဆီ MPT package များလက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Voice mail service နဲ့ ဖုန်းမကိုင်နိုင်တဲ့ အခါတွေမှာ၊ အသံဖိုင်လက်ခံလို့ရပြီ။
ဖုန်းနံပါတ် ခြောက်ခုအထိ တပြိုင်တည်းဖုန်ခေါ်နိုင်ပြီ
Yu Htar Service
MPT ရဲ့ ယူထား ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ကြိုသုံးလို့ ရနေပြီနော်။